LG Q8 (2018): Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta nke etiti etiti | Gam akporosis
LG Q8 (2018): Ọhụrụ dị n'etiti mmiri
Ihe dị ka ọnwa abụọ gara aga LG gosipụtara LG Q7 (2018), usoro ọhụụ ọhụụ. Ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ na-ewetara anyị onye ọhụụ nke ezinụlọ a. Ọ bụ ihe LG Q8 (2018), ekwentị nwere ọtụtụ akụkụ jikọrọ ya na ihe atụ ewepụtara ọnwa abụọ gara aga. Ha abụọ bịara ime ka etiti ụlọ ọrụ South Korea sikwuo ike.
LG Q8 (2018) a na-apụta maka akụkụ ụfọdụ, dị ka nnukwu ihuenyo ya, na nguzogide mmiri. Ya mere, anyị na-eche ihu ihe nlereanya nke na-enye ọtụtụ n'ime LG n'etiti. Anyị amatakwala nkọwa ya n'ụzọ zuru ezu.
Dị ka ọ dị na mbụ na ekwentị, ihe nlere anya adighi-acho obi uto. Ọ na-agbaso n'ụzọ zuru ezu na nke a, mana ọ na-abụkarị ọnụ ahịa na-ebute nsogbu ndị ọzọ ma ghara ikwe ka igwe nwee nnukwu ahịa dị otú ahụ.
1 Nkọwa LG Q8 (2018)
Nkọwa LG Q8 (2018)
Na ụdị ndị gara aga, anyị ahụla ka a na-awụlikwa elu na ogo dị n'etiti ụlọ ọrụ Korea. Ihe a hụrụ ọzọ na LG Q8 (2018). Na mgbakwunye, anyị nwekwara ike ịhụ nnukwu mmụba na nha ekwentị, ebe ọ bụ na ihe nlereanya a anyị gafere 6 sentimita asatọ n'ogo. Ndị a bụ nkọwa ya zuru ezu:
Ihuenyo: 6,2 sentimita asatọ na mkpebi FullHD + (2160 x 1080) na 18: 9 ruru
Nchekwa dị n'ime: 64 GB (gbasaa site na microSD)
Igwefoto na-abịa: 16 MP na ikanam Flash na PDAF
Sistemụ nrụọrụ: Android 8.1 Oreo
Batrị: 3.300 mAh na ụgwọ ngwa ngwa
Akụkụ: 160.1 x 77.7 x 8.4 mm
Arọ: gram 172
Njikọta: Typedị USB C, WiFi ac, ihe nkwụnye mkpịsị aka azụ
Ndị ọzọ: IP68 na-eguzogide mmiri, DAC, MIL-STD.810G, DTS: X
Banyere imewe, LG Q8 (2018) a na-enye ihe ịtụnanya ole na ole. Ekwentị na-ahọrọ maka ihuenyo nwere obere okpokolo agba na nha 18: 9, si otú a na-agbaso nzọụkwụ nke ọtụtụ n'ime ekwentị ndị na-emepụta ihe amalitela n'ahịa. Dị ahụ bụ otu n’ime ndị mbụ nabatara ụdị ngosi a. Ọ na-apụta maka nnukwu nha ya, nke nwere sentimita 6,2 na ezigbo mkpebi. Ezigbo ihuenyo maka oriri ọdịnaya.
Ebe ọ nwere ike imechu ihu ntakịrị dị n'ike. O nweghi ihe nhazi kachasi nma n’ebe ahu na Qualcomm, n’etinye ihe n’ile Snapdragon 450. Na usoro RAM na nchekwa dị n'ime, anyị na-ahụ njikọta pụrụ iche nke 4/64 GB. Batrị ahụ ekwesịghị ịbụ nsogbu na LG Q8 (2018) a, ya na 3.300 mAh, nke ga-enye nnwere onwe. Ke adianade do, anyị nwere ngwa ngwa odori dị na nlereanya. Ọrụ nke ejiri n'aka na ọ bara uru.
Anyị na-ahụ otu igwefoto, ma n'ihu na n'azụ ihe nlereanya ahụ. Mana nke a abụghị ihe jọgburu onwe ya, n'ihi na ọ dị ka igwefoto abụọ nke ụdị ahụ karịa imeju ozi ha. Igwefoto n'ihu na-apụta maka ogo 100 n'obosara. Ezie na azụ nke ihe nlereanya nwere ikanam Flash na autofocus, nke kwesịrị inyere anyị aka iji foto dị mma.
N'etiti ndị ọzọ nke nkọwa ya, nke kachasị pụta ìhè asambodo IP68 nke ihe nlere a. Ekele ya na anyị ga-enwe ike mikpuo ekwentị. Nhọrọ dị mma maka ndị ọrụ chọrọ iji ya na njem ha, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ daba na mmiri na mberede. Anyị nwekwara ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na azụ nke etiti.
Anyị nwere ike ịhụ na LG Q8 (2018) bụ ihe na-adọrọ mmasị nke ukwuu maka etiti. Agbanyeghị, ọnụahịa ya nwere ike ịbụ ihe ga - egbochi gị inwe ọganiihu n’ahịa. Maka ugbu a ihe nlere a di na South Korea, ebe ọ dị na agba abụọ (acha anụnụ anụnụ na nwa).
Onweghi ihe amara maka mbido ya na ahịa ọhụụ. Dị ahụ ekwubeghị ihe ọ bụla, ya mere, anyị ga-echere ịmatakwu na nke a. Anyị enweghị ọnụahịa ikpeazụ ya na Europe. Na South Korea, e rere ya ere maka ihe dị ka euro 415 na mgbanwe. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ọnụ karịa karịa na mbata na kọntinent ochie ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG Q8 (2018): Ọhụrụ dị n'etiti mmiri
A gam akporo 9.0 achịcha dị ebe a: Chọpụta nkọwa niile